Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Misy sampana enina no mpikambana ao amin’ny APSE dia ny gazety « Lakroan’i Madagasikara », « Amis de Lakroa »(ADL), ny Pastoralin’ny Mpiasan’Orinasa (PMO), ny Centre chrétien de la Santé(CCS), ny Cours de Formation Générale pour adultes Ruraux (CFGR), ny Ivontoerana Arrupe Faravohitra (CSA) izay sady mpandrindra io sehatr’asan’ny Zezoita io, ary miaraka aminy ny Pastoralin’ny fahasalamana sy ny fianakaviana (PSF). Tsara marihina fa mety hitombo hatrany ireo arakaraky ny zava-misy hikatrohan’ny Fikambanana eo amin’ny sosialy sy tontolo iainana. Manana vina ny APSE dia ny hisian’ny fiarahamonina hanjakan’ny rariny bebe kokoa sy hananana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa, « une société plus juste et un monde plus viable »
Ny mampiavaka ity hetsika ity dia ao anatin’ny hateloan-taona ho fankalazana ny faha 50 taonan’ny faritra zezoita eto Madagasikara izay amin’ny taona 2021 ny tampon’ny fankalazana. Nosafidian’ny Mpiray dia zezoita eto amin’ny faritra ny hamoizana ny lohahevitra « Reconciliation et justice ». Toy izany koa, feno 50 taona amin’ity taona ity ny nananganana ny apostolat sosialy eran-tany tany Roma ka nifidy io lohevitra io ihany koa entina hanamarihana izany.
Raha hiverina amin’ny ny andro sosialy isika dia azo lazaina fa io no ambohi-pihaonana hifanentanan’ny olona mikatsaka izay hahasoa ny fiarahamonina mipaka amin’ny firenena sy izao tontolo izao. Hifamporisihina amin’ny tsara vita sy hifanohintohinan’ny samy olom-pirenena ho fanitsiana sy fanarenana ny tsy mety : fankahalana sy fandrangitana adilahy politika na ara-pihaviana na ara-pinoana noho ny fahasamihafana. Mitarika amin’ny tsy fifampitokisana sy fahapotehana, ao koa ny kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna mampitombo elanelana eo amin’ny samy Malagasy : ny mahantra sy manankarena, ny matanjaka sy osa, ny ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe… Fa indrindra toa mampahazo vahana ny toe-tsaina tsy maty manota, manimba ny firenena amin’ny lafiny rehetra. Anisan’izany ny toe-karena sy kolontsaina, fanabeazana sy ny sisa, ny fitiavan-tena ka handavana tsy hanome sy tsy hifampizara ny tombotsoa azo avy amin’ny harem-pirenena sy ireo fahefana nankinina tamin’ny olom-boafidy. Miteraka tsy rariny daholo ireo ary rehefa be loatra ny tsy rariny dia manjaka ny tsy fifampitokisana sy tsy fandriam-pahalemana. Manakaiky ny trangan-java-misy iainantsika andavan’andro izany ary ny lohahevitra mandritra ny hetsika andro sosialy dia ezahana hahakasika izany.
Fomba entina manatanteraka izany andro sosialy izany dia hisy ny vavaka eo am-panombohana sy amin’ny famaranana, hisy ny fampisehoana mivelatra ataon’ireo mpikambana voatanisa etsy ambony, hisy dinika arahina ady hevitra ary asam-baomiera hifampizarana traikefa hanasana olona manana fahalalana manokana amin’ny sehatry ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana, na koa olona manana fahalalana misy fiantraikany amin’ireo.
Tamin’ny taona 2018 dia ny « Fiangonana sy ny Fanjakana » no loha-hevi-dehibe nanentanana ny hetsika rehetra, ary efa hivoaka ao anatin’ny gazety boky « Echo Arrupe » amin’ity hetsika 2019 ity ny fehin-kevi-dehibe tamin’izany. Ny « Fampihavanana sy fahamarinana, ny rariny sy hitsiny : mba ho fandrafetana fiaraha-monina ara-drariny sy fanorenana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa.», no nofidina tamin’ity taona 2019 ity.
Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra aoriany dia mikasika ny fampihavanana araka ny fomba fijerin’ny Mpino aloha voalohany indrindra, satria azo lazaina fa izy ireo no manana traikefa goavana eo amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra na Zanahary ka mahalala ny hoe fihavanana sy fampihavanana. Manana anjara toerana lehibe amin’ny fifandraisana ny fihavanana ary kolontsaina irina hananan’ny mpiara-monina rehetra ny fampihavanana. « Sambatra ny Mpampihavana fa antsoina hoe zanak’Andrimanitra » (Mt5,8). Ireo antokom-pivavahana eran-tany, ary isan’izany ny Kristianina sy ny Silamo, dia sady manakatra ny hevitr’Andriamanitra no manana ny fomba fijery sy fanao mikasika fihavanana sy fampihavanana. Matoa io fampihavanana amin’Andriamanitra io no hanokafana ny lahadiniky ny andro sosialy 2019 dia ho fametrahana ny fahambonian’ny fanahy maha olona aloha voalohany indrindra fa eo ihany koa ny fahatokisana ny fahalavorarian’Andriamanitra ho fototry ny fanorenana ny zavatra rehetra. Ho an’ny Mpino, Andriamanitra na Zanahary dia lavorary ka raha hikatsaka ny fihavanana sy fampihavanana tena izy dia ao Aminy no hikaroana izany. Ahoana noho izany ny fomba entin’ireo fivavahana miaina sy mampianatra ny fihavanana amin’Andriamanitra na Zanahary amin’ny olona sy ny fihavanan’ny olona amin’ny tenany ? Io no ezahina ho fantarina amn’ny dinika voalohany.
Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra faharoa dia mitodika bebe kokoa amin’ny maha olona ankapobeny sy ny maha malagasy manokana. Manana rafitra fampihavanam-pirenena isika (CFM), isaorana ny vitany sy mbola ho ataony. Ny andro sosialy tsy mihanona amin’ny zava - misy eto Madagasikara fotsiny fa miainga amin’izay maha olona ny olona. Tsy mandeha irery na oviana na oviana ny olona fa tsy maintsy anaty fiarahamonina. Eny fa na roa ihany aza no miara-monina dia efa fantatry ny olon-kendry malagasy fa ny fifandraisana toy ny jiafotsy : « vao tsy ialan-kasokasoka, tonta tsy ialan-dromoromo ». Izany hoe tsy misy fiarahamonina tsy misy fifandonana fa mety kely mety goavam-be. Ka izay toe-piarahamonina izay indrindra no tsara ho fehezina tsy hanimba fa vao mainka arindra araka ny fihavanana. Ny fampihavanana dia kolontsaina mila volena sy hanana faka eo amin’ny samy olona indrindra ny ankizy sy ny tanora. Raiamandreny Mpanabe no anisan’ny hitondra ny lahadinika amin’io. Ho antsika Malagasy manokana dia napetraka ny fanontaniana hoe : « kolontsaina manao ahoana no mila hampiroboroboana ary inona ny vato misakana tsy maintsy hihoarana ?»
Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra fahatelo dia mitodika amin’ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Mila mikatsaka ny fomba hihavanana amin’ny tontolo iainantsika koa isika. Ny ansiklikan’ny Papa Fransoa ‘Laudato si » dia tsy misy tsy mitrandraka azy satria manampy be amin’izany fikatsahana izany fihavanana amin’ny tontolo iainana ny voalazany ao. Nisy fandaharana izay tao amin’ny televiziona frantsay iray izay nanaitra ny lohateny « Extinction des espèces : une Terre (bientôt) sans vie ?». Ho foana ve ny aina eto an-tany noho ny fahasimban’ny tontolo iainana ? Ny olona no fototry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Mila manova fomba fanao isika, mibebaka hoy ny kristianina, mba ho tontolo iainana tsy hivadika ho lasa tontolo hanafoana ny fisiantsika sy hamono, noho izany vahaolana ny hihavanantsika aminy.
Antenaina fa hisokatra sy ho voatrandraka amin’ny fandraisantsika anjara ireo lohahevitra ireo.
Raha ny fihavanana sy fampihavanana no tena voaresaka dia tsy ho adino velively ny fampanjakana ny rariny sy hitsiny, ny fahamarinana fa sady fitaovana entina manatanteraka izany no tanjona tiana ho tratrarina. Ny tsy fanajana ny rariny sy hitsiny no anisany mandrava fihavanana na amin’Andriamanitra, na amin’ny tenantsika, na amin’ny mpiara-monina na amin’ny tontolo iainana. Mifanohitra amin’ny kolontsaina fampihavanana ny fanaovana tsy rariny. Efa fantatra ohatra fa aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana fa mbola iniana ny manao ambony ny vola noho ny olona.Tsy rariny izany ary be ny no tafiditra ao anatin’izay fakam-panahy izay ka lasa mikorontana ny fiarahamonina, tsy mifampatoky intsony, lasa tena tsy mihavana fa mifampifahavalo.
Mbola tsy tara isika manarina ny fiarahamonintsika sy ny tontolo iainantsika. Izany indrindra no hanentanan’ny APSE antsika handray anjara amin’ny andro sosialy hatao ny 16, 17, 18 mey ao amin’ny Ivontoerana Arrupe EKAR Faravohitra Antananarivo.
P. Noël Marie Cyprien Médard Razafinandraina
Mpandrindra ny APSE